वास्तविकता यस्तो रहेछ,सरस्वती माबिको किताब फेरिएको बिषयमा। - Ujyaalo Sandesh Online
अबिन मेयाङ्बो,दमक/झापाको सरस्वती माबिमा यो बर्ष पढाई नै शुरु नभए पनि गत बर्ष लगाएको पुस्तक विस्थापित गर्दै नयाँ पुस्तक लगाएको बताईएको छ । गत बर्ष भन्दा अहिलेको पुस्तकको मूल्य दोब्बर भन्दा पनि बढि रहेको अभिभावहरुले बताएका छन् ।
विद्यालयका प्रधानध्यापक, बिषयगत शिक्षक र पब्लिकेसनहरुको मिलेमतोमा प्राय बिधालयले पुस्तक परिवर्तनको खेल नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु हुनसाथ गर्ने र गर्दै आएको छन। यहाँ पनि यस्तै भएको हुनसक्ने अभिभावकहरु बताउछन ।
पाठ्यपुस्तक परिवर्तनको बिषयमा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको बैठक पनि बसेको छैन । एक ब्यवस्थापन समितिका सदस्यका अनुसार यदि साच्चै पुस्तक परिवर्तन गर्नुृ पर्ने भएको भए ब्यवस्थापन समितिको बैठकमा यो कुरा ल्याउनु पर्थियो तर त्यस्तो भएको छैन ।
नेपाली मिडियमका पुस्तकहरु जनक शिक्षा सामाग्रिकै लगाईएको छ र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइने केहि बिषयको पुस्तक परिवर्तन गरिएको प्रधानध्यापक थापाले स्वीकार गरेकाछन्। केही बिषयगत शिक्षकहरुले नै गत बर्ष लगाएको पुस्तकमा धेरै कुरा समावेश नभएको या कमिकमजोरी भेटी पछि पब्लिकेसन तोकेर शिक्षकहरु कै अनुरोधमा नयाँ पुस्तक मगाइएको हो, उनले भने । जुनसुकै पुस्तक पसलबाट नै उक्त पब्लिकेसनको पुस्तक किन्न बिद्यार्थी तथा अभिभावकलाई छुट रहेको उनको भनाई छ।
उनले भनेका छन,’हामीले पहिलाको बर्षहरुमा एउटा पुस्तक पसललाई मात्र बिक्री बितरण गर्न दिन्थ्यौ तर यो पटक भने जसलाइ जहाँ सहज हुन्छ त्यही बाट लिन सक्ने र पछि स्कुलले दिनु पर्ने पैसा बिद्यार्थीहरुलाइ दिने भनिएकोले गर्दा मेरो ब्यक्तिगत छवि माथी धावा बोलिएको हो यसको उत्तर हामी भोलि दिनेछौ।’
किन पब्लिकेसनको नाम नै तोकियो ? र ब्यवस्थापन समितिमा किन निर्णय भएन ? भन्ने प्रश्नमा उनले यो गरेको भए राम्रो हुने आफुले पनि अहिले आएर बुझेको जनाए । मैले कमिसन लिएर यो गरेको होइन र छैन, उनले भने ।
पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयहरुले आफुखुसि नीजि पब्लिकेसनको पुस्तकहरु किन्न विद्यार्थीहरुलाई भन्न थालेको पाईएको छ । यस बिषयमा नगरपालिका लगायत सरोकारवाला निकायहरुको ध्यान जान आवश्यक छ ।